Farmaajo Oo Qaatay Shahaadada Musharaxnimo Ee Xilka Madaxweynaha. – STAR FM SOMALIA
Guddiga qaban-qaabada doorashada Madaxweynaha 10-aad ayaa maalintii labaad Muqdisho gaar ahaan Xarunta Aqalka Sare ka wada bixinta shahaadada Musharaxiinta xilka Madaxweynaha dowladda Federaalka, taasi oo shalay Guddiga bilaabeen.
Guddiga doorashada ayaa diiwaan-geliyay inta badan Musharax oo dooneysa inay u tartamaan xilka Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka, isla markaana waxaa Guddiga ay Musharaxiinta siiyeen shahaadada Musharaxnimo ee xilka Madaxweynaha.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xalay ku dhawaaqay inuu mar kale yahay Musharax Madaxweyne ayaa qaatay shahaadada Musharaxnimo ee xilka Madaxweynaha dowladda Federaalka.
Guddiga doorashada ayaa diiwaan-geliyay Farmaajo, iyagoona siiyay shahaadada, kadib markii uu soo buuxiyey shuruudaha looga baahan yahay Musharaxiinta isa soo sharxday, isagoona bixiyey lacagta diiwaan-gelinta oo dhan 40,000 kun oo dollar.
Doorashada Madaxweynaha 10-aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa loo qorsheeyay inay Magaalada Muqdisho ka dhacdo 15-ka bishaan May oo ku beegan maalinta Axada ee todobaadka soo socda, waxaana socda olole doorasho.